Samuuʼeel Wanaagga Ma Dhaafin | Carruurtaada Wax Bar
Samuuʼeel Wanaagga Ma Dhaafin
Ilaa yaraantiisii Samuuʼeel wuxuu degganaa oona ka shaqeyn jiray taambuugga. Taambuugga wuxuu ahaa meeshii ay dadka Yehowah ku caabudi jireen. Ma taqaannaa waxa Samuuʼeel keenay taambuugga? Bal horta hooyadiis Xannaah aan wax ka baranno.
Waqti dheer Xannaah aad bay u rabtay inay carruur dhasho. Laakiin ma dhali karin. Yehowah bay u tukatay oo inuu caawiyo bay ka bariday. Haddii ay wiil dhasho waxay u ballanqaadday inay taambuugga geyn doonto siduu uga shaqeeyo oona u dego. Yehowah salaaddeedii wuu aqbalay. Wiil bay dhashay waxayna u bixisay Samuuʼeel. Xannaah ballanteedii way sameysay. Samuuʼeel taambuugga bay geesay markuu jiray saddex ama afar siduu Ilaahay ugu adeego.
Ceelii wuxuu ahaa wadaadka sare ee taambuugga. Labadiisa wiilna wadaado bay ahaayeen. Taambuugga ha illoobin inuu ahaa gurigii Ilaah. Dadka joogana inay sameeyaan waxyaalo wanaagsan bay ahayd. Laakiin wiilashii Ceelii waxyaalo aad u xun bay sameyn jireen. Samuuʼeel waxay sameyn jireen wuu u jeeday. Samuuʼeel ma sidii wiilashii Ceelii buu waxa xun sameyn jiray?— Maya sidii waalidkiisa bareen wanaagga ma dhaafi jireen.
Maxay ahayd inuu Ceelii wiilashiisa ka qabto?— Waxay ahayd inuu edbiyo. Ma ahayn inuu guriga Ilaahay u oggolaado inay ka shaqeeyaan. Laakiinse Ceelii sidaas ma sameynin oo Yehowah isaga iyo wiilashiisiiba aad buu ugu cadhooday. Yehowah wuxuu ku talaggalay inuu xukumo.
Samuuʼeel Ceelii wuu u sheegay farriintii Yehowah
Habeenkii Samuuʼeel oo hurdo cod baa u yeeray oo ku yiri: ‘Samuuʼeelow!’ Ceelii buu ku orday haddaba Ceelii wuxuu ku yiri: ‘Anigu kuuma aan yeerin.’ Laba jeer oo kale bay waxan dhaceen. Markii saddexaad Ceelii Samuuʼeel wuxuu ku yiri mar kale haddii ad codka maqashid ku dheh: ‘Yehowahow ila hadal waan ku maqlayaaye.’ Samuuʼeel sidan buu yeelay. Markaasna Yehowah wuxuu Samuuʼeel ku yiri: ‘Ceelii u sheeg inaan reerkiisa xukumi doono xumaanta ay sameeyeen aawadeed.’ Ma wax fudud bay ahayd inuu Samuuʼeel farriintan Ceelii u sheego?— Maya way adkeed Samuuʼeelna wuu cabsanayay. Laakiin weli wuu sameeyay Yehowah wuxuu u sheegay. Yehowah wuxuu sheegay way rumoobeen. Wiilashii Ceelii waa la dilay Ceeliina wuu dhintay.
Samuuʼeel waa qof aan ku dayan karno. In kastuu arkay dad waxyaalo xun sameynayo isagu fiicnaanta ka ma leexan. Samuuʼeel wanaagga ma dhaafin. Bal adigana? Waalidkaaga iyo Yehowahba waad ka farxin doontaa haddaad sidiisii oo kale yeeshid.
1 Samuuʼeel 2:22-26; 3:1-21
Samuuʼeel hooyadiis ballantee bay qaadday?
Markuu Samuuʼeel taambuugga joogay muxuu arkay inay Ceelii wiilashiisii sameynayeen?
Yehowah muxuu Samuuʼeel u sheegay inuu sameeyo?
Muxuu Samuuʼeel u yahay qof fiican oo aan ku dayan karno?
Wadaag Wadaag Samuuʼeel Wanaagga Ma Dhaafin